The Night Before (2015) – Myanmar Subtitles
Genre: Adventure, Comedy, Fantasy Director: Jonathan Levine Actors: Anthony Mackie, Jillian Bell, Joseph Gordon-Levitt, Seth Rogen Country: USA Released: 20 Nov 2015 Score: 6.4 Duration: 101 min Quality: 720p Years: 2015 View: 1,422
imdb 6.6/10ရရှိထားတဲ့ ဒါရိုက်တာ Jonathan Levine ရဲ့ ဟာသဇာတ်ကားကောင်းလေးပါ မင်းသားတွေကတော့ ရုပ်ရှင်ချစ်သူတွေရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်တဲ့ Seth Rogen, Joseph Gordon‑Levitt, Anthony Mackieတို့ ဖြစ်ပါတယ် မင်းသမီးကလဲ Lizzy Caplan( Now you see me 2) ပါ ဇာတ်လမ်းအညွှန်းလေးပြောရရင်တော့ ခရစ်စမတ်မရောက်ခင် ရက်ပိုင်းအလိုမှာ အီသန်ဆိုတဲ့ကောင်လေးရဲ့ မိဘတွေကားအက်ဆီဒန့် ဖြစ်ပြီးဆုံးပါးသွားခဲ့ပါတယ် အီသန်ဟာ ခရစ်စမတ်မှာ အတူဖြတ်သန်းစရာ မိဘတွေလဲမရှိ တစ်ကောင်ကြွက်အထီးကျန်ဘဝနဲ့ အိမ်တွင်းအောင်းကာ ဝမ်းနည်းပူဆွေးနေပါတယ် အဲ့ဒါကို မကြည့်ရက်တဲ့ အီသန်ရဲ့အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်း အိုင်ဆက်နဲ့ခရစ်ဟာ အီသန်ကို အိမ်အပြင်ဘက်ကိုထွက်လည်ဖို့မရမကဆွဲခေါ်ပါတော့တယ် အီသန်ကိုအရက်ဆိုင်ကိုခေါ်သွား အရက်တွေမူးအောင်တိုက်ပြီး ခရစ်စမတ်မှာ အထီးမကျန်အောင် သူ့ သူငယ်ချင်းတွေအဖော်ပြုပေးခဲ့ကြတယ် အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီး ခရစ်စမတ်မှာသူငယ်ချင်းသုံးယောက်အတူကဲကြတာဟာ ထုံးစံဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ် တစ်ခုသောခရစ်စမတ်ညမှာတော့ သူတို့ သုံးယောက်ဟာ ခရစ်စမတ်ညမှာ အမုန်းကဲလို့ ရမယ့် လျှို့ဝှက်ပါတီပွဲ တစ်ခုရှိတယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းသိလိုက်ရပါတယ် သူတို့ ဟာ အဲ့ဒီလျှို့ဝှက်ပါတီကို သွားကဲချင်ပေမယ့် ဘယ်မှာမှန်းမသိကြပါဘူး တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ် အဲ့ပါတီကို သွားဖို့ကြိုးစားကြပေမယ့် မအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူး အဲ့လိုနဲ့ သူတို့ လဲအသက်အရွယ်တွေရ အိမ်ထောင်တွေကျသွားတဲ့အခါမှာတော့. . .
Translated and Encoded by Myo Khant
(530 MB) Download
#The Night Before (2015) #Download The Night Before (2015) Full Movie #Free The Night Before (2015) Download